तेश्रो खेलमा पनि सन्दिप चम्किए ! वर्षाको कारण खेल नतिजाबिहिन – WicketNepal
तेश्रो खेलमा पनि सन्दिप चम्किए ! वर्षाको कारण खेल नतिजाबिहिन
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ मंसिर ९, आईतवार २२:१८
विकेटनेपाल, मङ्सिर-९ आइतबार
युएईमा जारि टि-१० लिग प्रतियोगिता अन्तर्गत सन्दिप लामिछानेको टिम केरला नाइट्स र ब्रेण्डन म्याकलम कप्तानीको राजपुत्स बीचको खेल नतिजाबिहिन टुंगिएको छ।
खेलमा टस जितेर केरलाले राजपुत्सलाई ब्याटिंग गर्न निम्त्याएको थियो। राजपुत्सले ९ ओभरको समाप्तिमा ९४ रन बनाएर ५ विकेट गुमाउदा वर्षाको कारण खेल रोकिन पुग्यो र पुनः सुचारु हुन नसक्दा नतिजा बिहिन हुनपुग्यो।
राजपुत्सको इनिंगमा लौरी इभान्सले अविजित ३८ रन ( १९ बल, २ चौका र २ छक्का ) बनाएर ब्याटिंग गरिरहेका थिए भने कप्तान म्याकलम र रोस्सोउ २१ रन बनाएर आउट भएका थिए। केरलाको लागि सन्दिप लामिछाने र फाबियन एलेनले समान २/२ विकेट र मोहम्मद नाबेदले १ विकेट लिए।
प्रतियोगितामा सानदार लयमा रहेका सन्दिपले २ महत्वपूर्ण विकेट लिंदै पुनः आफुलाई उत्कृस्ट प्रमाणित गरेका छन्। खेलमा पहिलो ओभर बलिङ्ग गर्न आएका सन्दिपले आफ्नो लयलाई कायम राख्दै विकेटको साथै किफायती बलिङ्ग समेत गरे।
खेलको क्रममा कप्तान मोर्गनसंग सन्दिप
सन्दिपको ओभरको पहिलो बलमा मोहम्मद सहजादले १ रन लिंदै कप्तान ब्रेण्डन म्याकलमलाई स्ट्राइक दिएका थिए जसपछि लगातार २ बलमा रन बनाउन चुकेका म्याकलमले चौथो बलमा १ रन लिंदै पुनः सहजादलाई स्ट्राइक दिएका थिए।
ओभरको पाँचौ बलमा सहजादले रुम बनाएर अफ-साइडमा खेल्न खोजेको सटमा उनि सर्ट- एक्स्ट्रा कभरमा समातिन पुगेका थिए। वायन पार्नेलको बलमा सहजाद १ रन मात्रै बनाएर आउट हुँदा सन्दिपले प्रतियोगिताको विकेट संख्या ५ पुर्याएका थिए।
प्रतियोगिताको पहिलो खेलमै १६ बलमा ८ छक्का र ६ चौका प्रहार गर्दै ७४ रन बनाएका सहजाद जस्ता खतरनाक ब्याट्सम्यानको ठुलो विकेट लिएपछि सन्दिपले पुनः आफुलाई महत्वपूर्ण सावित गरेका हुन्।
पहिलो ओभरमा सन्दिपले मात्र ६ रन खर्चेर १ विकेट लिए जसमा पनि ओभरको अन्तिम बलको चौका ब्याट्सम्यानको भित्रि किनारा लागेर विकेटकिपरको पछाडी गएको थियो।
सन्दिपको पहिलो ओभरको ६ बल – १ रन ( सहजाद ) , डट बल (म्याकलम ) , डट बल (म्याकलम ) , १ रन (म्याकलम ) , विकेट ( सहजाद ) , चौका ! ( रोस्सोउ )
ब्राथवेट बने सन्दिपको दोश्रो शिकार
पहिलो ओभरनै अत्यन्त सफल भए पछि सातौँ ओभरमा स्पेलको दोश्रो ओभर गरेका सन्दिपलाई ओभरको पहिलो र दोश्रो बलमा लौरिया इभान्सले छक्का प्रहार गरे। त्यसपछि तेश्रो बलमा १ रन लिएपछि स्ट्राइकमा वेस्ट इन्डिज स्टार खेलाडी कार्लोस ब्राथवेट आए।
ब्राथवेटलाई सन्दिपले पहिलो बलमै अर्का वेस्ट इन्डिज स्टार काइरन पोलार्डको हातबाट बाउन्ड्रीमा क्याच आउट गराए र टिमलाई चौथो र व्यक्तिगत विकेट संख्या २ पुर्याए।
ओभरको पाँचौ बलमा बेन डंकले रन बनाउन सकेनन् भने अन्तिम बलमा चौका प्रहार गरे पछि सन्दिपले आफ्नो २ ओभरमा २३ रन खर्चेर २ विकेट लिए।
सन्दिपको दोश्रो ओभरको ६ बल – छक्का ( इभान्स ) , छक्का ( इभान्स ) , १ रन ( इभान्स ) , विकेट ! ( ब्राथवेट ) , डट बल ( बेन डंक ) , चौका ( बेन डंक )
बिरुद्ध पख्तुन्स – ३ विकेट ( २-०-१७-३ ) , बिरुद्ध सिन्धिज – १ विकेट ( २-०-१४-१ ) , बिरुद्ध राजपुत्स – २ विकेट ( २-०-२३-२ )
ड्यानियल भिटोरीको प्रशंशा
खेलको दौरान केरला नाइट्सका प्रशिक्षक ड्यानियल भिटोरीले अन्तर्वार्ताको क्रममा सन्दिपको तारिफ गर्दै सानै उमेरमा प्रतिभावान खेलाडी रहेको र अझ धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेको बताए। खेलको दौरान पनि कमेन्टेटरहरुले बारम्बार सन्दिपको नाम लिएर प्रसंशा गर्दै मात्र १८ बर्षमानै सन्दिपको सफलताको बयान गरिरहेका थिए।
अघिल्लो २ खेलमा सन्दिपको प्रदर्शन